Magnets NdFeB sy SmCo ampiasaina amin'ny paompy andriamby
Ny andriamby NdFeB sy SmCo matanjaka dia mety hiteraka herinaratra handroahana zavatra sasany nefa tsy misy fifandraisana mivantana, ka fampiharana be dia be no manararaotra an'io endri-javatra io, toy ny fametahana andriamby ary avy eo paompy mifangaro ho an'ny fampiharana tsy misy tombo-kase. Magnetic drive couplings manolotra tsy mifandray tr ...
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 21-06-10
5G, ny teknolojia fifandraisan-davitra finday ho an'ny taranaka fahadimy dia taranaka vaovao amin'ny teknolojia fifandraisana an-tariby broadband miaraka amin'ny toetran'ny hafainganam-pandeha avo lenta, fanemorana ambany ary fifandraisana lehibe. Izy io dia ny fotodrafitrasa amin'ny tambajotra mba hahatsapana ny fifandraisan'ny masinin'olombelona sy ny zavatra. Ny Internet o ...
Toetran'ny andriamby sy Neodymium ao Shina
avy amin'ny admin tamin'ny 21-05-06
Ny indostrian'ny fitaovana manerantany maharitra any Shina dia mitana andraikitra lehibe manerantany. Tsy betsaka ny orinasa mirotsaka amin'ny famokarana sy ny fampiharana, fa koa ny asa fikarohana dia efa niakatra. Ireo akora manerantany maharitra dia mizara ho andriamby tsy fahita amin'ny tany, vy maharitra ...
Andramana noezahana hampiasaina tany Sina taloha
avy amin'ny admin tamin'ny 21-04-08
Ny fananana fitrohana vy an'ny magnetite dia efa ela no nahitana azy. Ao amin'ny boky sivy amin'ny lohataona sy ny fararanon'ny fararan'i Lu, dia misy izao teny izao: "raha tsara fanahy ianao amin'ny fitadiavana vy dia mety hitarika azy ianao." Tamin'izany fotoana izany dia nantsoin'ny olona hoe "magnetism" ho "hatsaram-panahy". Th ...
Rahoviana ary Aiza no ahita ny andriamby
avy amin'ny admin tamin'ny 21-03-11
Ny andriamby dia tsy forona namboarin'ny olona fa fitaovana mazika voajanahary. Ny grika sy sinoa taloha dia nahita vato natoraly natoraly natiora nantsoina hoe "andriamby". Ity karazan-bato ity dia afaka mitsentsitra majika vy kely amin'ny vy mahagaga ary manondro lalana mitovy hatrany aorian'ny swi ...